D-pantolactone bụ intermediate chiral dị mkpa maka usoro nke usoro D-pantothenic acid. A na-ejikarị ya maka njikọ nke pantothenic acid (vitamin B5) ma ọ bụ nnu nke calcium, D-panthenol (vitamin B5), D-pantoethylamine na ngwaahịa ndị ọzọ.
Companylọ ọrụ anyị na-anabata nje bacteria na-emepụta mkpụrụ ndụ ihe ọmụmụ nke onwe L-lactonohydrolase na-emepụta ọgwụ na teknụzụ nke mbido na teknụzụ na-egbochi ihe, ma na-akwadebe D-pantolactone site na ụzọ na-esote iji kwadebe D-calcium pantotheate:
Site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke mmepe teknụzụ na njikarịcha usoro, a na-eji gbaa ụka dị elu ugbu a na sistemụ nke co coli, ọrụ mmegharị ahụ nwere ike iru 15000 U / L, yana mmịpụta enzyme kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, nsacha, mgbanwe na anaghị egbu egbu. ahịrị kpebisiri ike. Mmiri enzyme ahụ nwere ịdị ọcha dị elu, ọrụ nkwụsị ọ bụla, ike dị mma, ịrụ ọrụ nzacha ezi, arụmọrụ dị elu na nhazi enzymatic nke D-pantolactone, usoro dị mfe na ezigbo ngwaahịa. Site na njikarịcha teknụzụ nkwadebe maka iwebata ndị na - ebubata ikuku, teknụzụ ndị na - eme nkwado emeela ka ọghọm dị egwu na usoro na ọnụ ahịa. Site na nnwale nta na nke etiti, ọrụ mmebi ahụ nwere ike iru ihe karịrị 100U / g, enwere ike ịgbakọ ụgbụ ntụgharị okirikiri ihe ruru otu narị batrị dabere na ọkwa nrụrụ enzyme.